Global Voices teny Malagasy » Ejipta: Maizina Ao Kairo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Aogositra 2012 4:38 GMT 1	 · Mpanoratra Eman AbdElRahman Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Vaovao Mafana
Hafa kely ny lohataona ao Ejipta tamin’ity. Iharan’ny fahatapahan-jiro sy rano miverimberina isan’andro ireo distrika samihafa tao anatin’izay volana vitsy izay. Ary amin’izany, mbola tsy nisy ny fanambarana mazava avy amin’ny manampahefana, fantatry ny olona ihany anefa hoe noho ny fampihenana ny vesatry ny milina mpamokatra herinaratra no anton’ny fahatapahan’ny herinaratra miverimberina.
Na dia izany aza, hafakely ny androany [8 Aogositra 2012]. Maro tamin’ireo mponina ao Kairo no niharan’ny fahatapan-jiro vao maraina, na tany an-trano izany na tany amin’ny birao, ary tratran’izany ihany koa ary ny metro ambanin’ny tany sy ny tsenam-bola [Bourse] Ejipsiana
Mado nitantara ny nahazo azy:
@mado_1  النور قطع عليا في المترو ونزلت سعد زغلول ومن سعد زغلول مشيت للتحرير علشان اخد الخط التاني لقيته برضوا مش شغال.
Tapaka ny herinaratra raha tao anaty metro. Niala tao amin’ny fiantsonana Saad Zaghloul aho, ary teo aho no nandeha tongotra ho an’ny amin’ny kianja Tahrir mba handray metro hafa indray, saingy mbola tsy nandeha ihany koa ilay metro tao.
@mado_1  ركبت من التحرير لشغلي ولما وصلت الشغل لقيت النور قاطع وفضل قاطع لمدة ساعتين ونص ويا دوب لسة راجع
Nandray fiara hafa tao Tahrir aho handeha hamonjy ny asako, ka vao tonga tao am-piasana aho dia mbola tsy mandeha ihany ny herinaratra. Tapaka nandritra ny roa ora izany ary avy eo niverina ihany.
Mostafa Al Naggar, mpikambana teo aloha tao amin’ny antenimiera nilaza hoe:
Zava-doza mahafaty ny fahatapan’ny herinaratra any anaty metro. Tokony hoentina hotsaraina eny amin'ny fitsarana ireo tompon'andraikitra mahavanon-doza tahaka izany. Tsy handefitra amin'ny tandrevaka, ny fangalarana sy ny fahatapahan-jiro tahaka izany intsony ny vahoaka.
Maged Abedo nanontany hoe:
Fa nahoana no tsy misy fitaovana mampandeha herinaratra ao anaty metro, kanefa ao an-tanàna City Stars (tranom-barotra malaza ao Kairo) ahitana izany ?
Hany Hathout nitaraina hoe:
@HHathout : Maizina. Tsy misy herinaratra manerana ny tanàna.
Nanontany ilay mpanao gazety, Sarah Carr:
@Sarahcarr : Niely sy matetika toy izao ve ny fahatapahan-jiro tao Kairo tamin'ny lohataona lasa?
Hoy koa i Amr Hassan nanamarika:
@superamr : Miposaka tsara ny masoandro. Tsy misy ny herinaratra. #Cairo
Saingy nilaza kosa ny mponina iray fa mitondra filaminana ao Kairo ny fahatapahan'ny herinaratra. Hoy i Patricia Stein naneho hevitra:
@PsteinND : Mangina ao #Kairo amin'ny fotoana fahatapahan-jiro…mangina mahafinaritra. Mangataka aho mba atao lavalava ny fahatapahana. Mitondra ny olona hifantoka amin'ny zava-misy izany
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/08/11/36973/